भजनसंग्रह 43 ERV-NE;NIV - हे परमेश्वर, - Bible Gateway
भजनसंग्रह 42भजनसंग्रह 44
भजनसंग्रह 43 Nepali Bible: Easy-to-Read Version (ERV-NE)
43 हे परमेश्वर, एकजना मानिस छ, जो तपाईंका भक्तजन मध्ये एकजना होइन।
त्यो मानिस दुष्ट छ र झूटो बोल्दछ।
हे परमेश्वर, मेरो रक्षा गर्नुहोस्, अनि प्रमाण दिनु होस् कि म सही छु।
मलाई त्यो मानिसबाट बचाउनु होस्।
2 हे परमेश्वर, तपाईं मेरो सुरक्षा-स्थल हुनुहुन्छ,
किन तपाईंले मलाई त्यग्नु भयो?
किन तपाईंले मलाई देखाउनु भएन
कि कसरी म मेरो शत्रुदेखि भाग्नु।
3 हे परमेश्वर, तपाईंको ज्योति र सत्यता ममाथि चम्कोस, तपाईंको ज्योति अनि सत्यताले मलाई बाटो देखाओस्।
तिनीहरूले मलाई तपाईंको पवित्र पर्वत अनि तपाईं बस्ने मन्दिरमा डोर्याउनेछन्।
4 म परमेश्वरको वेदीमा जानेछु।
हे परमेश्वर, म परमेश्वरकहाँ आउनेछु जसले मलाई अत्यन्तै खुशी बनाउँनु हुन्छ।
हे परमेश्वर, हे मेरो परमेश्वर,
म वीणा बजाएर परमेश्वरको प्रशंसा गर्छु।
5 किन म यति साह्रो तल झरें?
किन म यत्ति साह्रो विचलित छु?
मैले परमेश्वरको सहायताको निम्ति पर्खनु पर्नेछ,
म फेरि अझै पनि उहाँको प्रशंसा गर्न मौका पाउँछु,